Wondershare Software waxaa ka go'an difaaca gaarka ah. Waxaan soo ururin doonaa oo keliya macluumaadka shakhsiyeed ujeedooyin qeexan. Annagu ma la qaybiyo ama wadaagaan macluumaadka shakhsiyeed ka baxsan waxa si adag loo baahan yahay si ay u gutaan waajibaadka aannu idiin nimid. Waxaa laga yaabaa inaan xogtaada oo kaliya la-hawlgalayaasha oo u hoggaansamaan Wondershare ay ka go'antahay ilaalinta gaarka ah la wadaagto. Wondershare Software ma iibin doonaa macluumaadkaaga shakhsiyeed in kasta oo hab wax alla wixii.
Waa maxay macluumaadka aan ururino? Maxaan u isticmaasho?
Marka aad dalban website-kayaga, magacaaga oo buuxa, cinwaanka email, cinwaanka boostada, lambarka telefoonka, lambarka kaarka deynta, iyo taariikhda uu dhacayo kaadhka amaahda loo baahan doonaa. Macluumaadka waxaa loo isticmaalaa si loo dhamaystiro macaamil ganacsi oo aad nooga caawiso bixiyaan taageero iyo adeegyo ka wanaagsan in aad.
Sidee u Processor credit card xisbiga 3aad ilaaliyo macluumaadka macaamiisha ee?
Wondershare Software isticmaalaa server ammaan ah u martigeliyay SWREG iyo Processor kale credit card Xisbiga 3-in sir macluumaad shakhsiyeed oo dhan macaamiisha ah ee ka hor waxaa la noogu soo diray, oo ay ku jiraan magaca, cinwaanka, lambarka kaarka deynta, taariikhda uu dhacayo kaadhka amaahda, iwm sirta shaqeeyaa si looga hortago wax kasta oo isticmaalka arxandarada ah macluumaadkaaga shakhsiyeed. Macluumaadkaaga credit card waxaa loo isticmaalaa keliya guurka online.
SWREG waa adeeg horumarsan aamin online lacag bixinta diiwaangelinta software in uu ahaa howlgal tan iyo 1987. Wondershare Software waxa uu isticmaalaa SWREG si ay kuu siiyaan aad u amaan ah oo si dhakhso ah iibsashada online.
Si aad u fiican u fahmaan waxa ay adeegyo qiimo macaamiisheena, aan u isticmaalno "cookies". Cookie waa fayl yar text in Website ka qoray si wadid aad u adag. Kukiyada shaqeeyaan sida kaarka aqoonsiga iyo u qoraan laga yaabaa in sirta, la door iyo iibsadaan. Kukiyada ha server bogga internetka ee ogahay in aad ku soo laabtay this site. Kukiyada ayaa sidoo kale go'aan ka gaari kara macluumaad kale, sida martida maalin kasta si boggayaga internetka iyo bogagga goobta ugu badan ee soo booqday. Kukiyada waa mid gaar ah oo keliya baa la akhrisan kartaa by server iyaga ku meelaynayaa. Iyagu ma ay la dili karaa sida code ama samatabbixin fayrusyada.
Waad beddeli karaan goobaha ay biraawsarkaaga si looga hortago cookies haddii aadan rabin in ay set cookie ah marka aad booqato website-kayaga. Si kastaba ha ahaatee, by sidaas samaynaya, laga yaabaa in aanad si buuxda u helaan dhammaan bogagga internetka.
Hubi Heshiiska End User License >>